Aza mety ho Punk, ho Hunk ary Chunk ny atiny | Martech Zone
Izany stunk, miala tsiny! Antenaina fa nahasarika ny sainao izany. Dan Zarrella dia manana hafatra tsara amin'ny fametahana ny atiny. Averiko ny sasany amin'ireo toroheviny ary manipy ahy kely fotsiny.
Betsaka ny fikarohana natao momba ny fitondran-tenan'ny mpitsidika tranonkala sy ny fomba famakiany sy famakiana lahatsoratra sy pejy amin'ny tranokala fitetezana tranonkala. Fomba mahazatra ho an'ireo mpitsidika tranonkala ny famakiana angona na lohateny lehibe ao sakany toy izay mamaky lahatsoratra ambony ambany. Izaho manokana dia sahirana nanoratra tamin'ity fomba ity, saingy manohy manandrana ihany. Ny fampisarahana ireo atiny misy lohateny izay mety ho sahisahy, tsy mitovy loko na na lehibe kokoa dia hamela ireo mpitsidika hamaky haingana ny atiny. Ho fanampin'izay, ny fanasarahana ireo fehintsoratrao dia ahafahan'ny mpampiasa manadihady haingana, indraindray mitsambikina manomboka amin'ny fehezanteny manomboka amin'ny fehezanteny manokatra fa tsy mamaky ny antsipiriany rehetra eo anelanelany.
Nahazo izany rehetra izany ve ianao?
Angamba… mety tsy izany! Mety nitsambikina mivantana tamin'io ianao chunk. Soraty amin'ny fomba iray ny lahatsoratrao sy ny lahatsoratrao mba hahamety kokoa ny fivezivezena sy ny fahazoana izany:
Mampiasà lahatsoratra sahisahy - miavaka, sa tsy izany?
Mampiasà Subtitle - Ny lohatenin-dohateny dia mamela ny olona hanova haingana ny atiny.
Mampiasà Parace Paraces - Mampisaraka ny atiny ny elanelam-potoana ary mamela ny mpitsidika hamaky haingana ireo fehezanteny manokatra.
Mampiasà lisitra misy bala sy isa - voalamina izany ary mora vakiana.
Manorata sakamalao 5 ka hatramin'ny 10 - andramo ny roa mametra ary mijanona tsy miova amin'ny isan'ny fehintsoratra (izany hoe tapa-kazo) ao amin'ny atiny. Ny tsy fitoviana dia hanampy amin'ny fitazonana ny mpamaky satria mametraka ny andrasana amin'ny mpamaky ianao.
Tsy fanahy iniako ny nanapaka ny tapany voalohany tamin'ity lohahevitra ity, ary naneho izany, sa tsy izany? Ny vintana dia ny tsy namakianao izany fehintsoratra feno izany.
Tsy natao ho an'ny bilaogy ihany!
Izaho dia meloka toy ny olona tsy tapaka, fa hiasa mafy kokoa aho. Ianao koa tokony…… na ny tranonkalanao na ny bilaoginao, ny mpitsidika dia hitazona bebe kokoa momba ny tranokalanao sy ireo lahatsoratra ao aminy fa tsy hoe tsy mitapoka ianao. Rehefa mahatadidy bebe kokoa izy ireo dia hiverina ho bebe kokoa!
Tags: sakanyfahazavan-chunking atinyfamolavolana atinyfitiliana atinyDan Zarrella
Technorati Rank WordPress Plugin Version 2.0.4 Navoaka
Fanomezana boky natokana ho azy!
Apr 22, 2007 ao amin'ny 7: PM PM
Doug, torohevitra tena tsara, ampiasaiko ny lohateny lehibe amin'ny lohahevitra hatramin'ny mpanatanteraka ambony satria fantatro fa fohy ny fotoana ary afaka manapa-kevitra haingana raha toa ka mendrika ny fotoanany ny taratasiko